Falastiiniyiinta Oo Dhigaya Dibad Baxyo Ka Dhan Ah Goaankii Madaxweyne Trump Ee Qudus Iyo Dareenka Caalamku Ka Bixiyey
(Hadhwanaagnews) Thursday, December 07, 2017 15:45:06
Shacabka Falastiiniyiinta ee ku nool deegaanada la haysto ee Daanta Galbeed iyo Qaza ayaa billaabay isu soo baxyo ay ku diidan yihiin in Qudus ay noqoto caasimadda Israa'iil.
Dadkan ayaa ka cadheysan go'aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu Qudus ugu aqoonsaday caasimadda Israa'iil.
Israa'iil ayaa boqollaal ciidamo dheeraad ah geysay Daanta Galbeed, iyadoo laga cabsi qabo in xiisadda ay ka sii darto.
Warar hor dhac ah ayaa sheegaya in siddeed qof oo Falastiiniyiin ahi ay ku dhaawacmeen rabshadaha.
Go'aanka Trump oo isbedel wayn ku ah siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee tobannaanka sano soo jirtay waxaa laga bixiyay jawaabo
cadho leh oo caalamka oo dhan ka timi.
Dalal badan oo saaxiib dhow la ah Mareykanka ayaa diiday tallaabadaasi, Golaha amniga ee Qaramada Midoobey iyo ururka jaamacadda Carabta ayaa maalmaha soo socda kulmaya si ay jawaabtooda uga bixiyaan go'aanka Trump.
Waxaa jirto cabsi laga qabo in shaacintan ay soo celiso qalalaasii xumaa ee u dhexeeyay Falastiin iyo Israa'iil.
Ururka Xamaas ayaa ku dhawaaqay kacdoon cusub.
Sacuudiga ayaa cambaareeyay go'aanka Mareykank ugu aqoonsaday Quddus inay tahay caasimadda Israa'iil, iaydoo ay sii kordheyso cambaareynta caalamiga ah ee go'aankaasi.
War qoraal ah oo ay boqortooyada Sacduuiga soo saartay ayay ku sheegtay in go'aanka Trump uu yahay mid ' aan cudur daar lahayn''
Wuxuu sheegay Mr Trump in go'aankaas aan loola jeedin in Maraykanku uu faraha ka qaaday sidii ay uga go'nayd in nabad waarta laga gaadho bariga dhexe.
Falastiiniyiinta ku nool koonfurta marinka Qasa oo hadalkaas aad uga cadhaysan ayaa gubay sawirka Mr Trump, kan ra'iisul wasaaraha Israa'iil iyo calanka Yuhuudda.
Siday Dunida uga jawaabtay go'aanka Trump
Israa'iil: Ra'iisalwasaaraha Israa'iil, Benjamin Netanyahu,ayaa ku tilmaamay go'aan taariikhi ah oo caadil ah.
Falastiin: Afhayeen u hadlay kooxda Falastiiniyiinta ee Xamaas ayaa sheegay in ''albaabadii cadaabta'' ay furmeen.
Faransiiska: Madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa yidhi ''Ma taageersanin go'aankan oo aan waafaqsanayn shuruucda caalamiga ah waana mid shaleyto mudan''.
Turkiga: Wasiirka arrimaha Turkiga ayaa ku tilmaamay tallaabo Kheyrul-mas'uulnimo ah.
Paksitan: Dowldda Pakistan ayaa tidhi ''waxaa shallayto mudan in Trump uu iska dhaga tiray baaqyadii caalamka oo dhan uga imaanayay''.
Ra'iisalwasaaraha UK Theresa May ayaa sheegtay inay Trump arrintan kala hadli doonto.
Midowga Yurub iyo ururka Jaamacadda Carabta ayaa dhankooda walaac ka muujiyay saameynta uu yeelan karo go'aanka Trump.
Mr Trump wuxuu sheegay in uu diyaar u yahay inuu taageero xalka labo dal oo lagu dhameeyo khilaafka muddada dheer ka dhex jiray Israa'iil iyo Falastiin.
In yar ka hor intii uusan go'aankaas ku dhawaaqin ayuu madaxweyne Trump sheegay in tallaabadan ay ahayd inay goor hore dhacdo.
Qaybta qaddiimiga ah ee Qudus ayaa gidaar ku yaalla waxaa lagu shiday calanka Israa'iil ka hor intii uusan Donald Trump ku dhawaaqin go'aankiisa.
Talaadadii ayaa diblomaasiyiinta Maraykanka iyo ee Israa'iil iyo qoysaskooda waxaa lagula taliyey in aysan u socdaalin qaybta qadiimiga ah ee Quddus iyo daanta galbeed "ilaa iyo amar dambe".
Maxaa muhiim ka dhigaya go'aanka Trump?
Magaalada Qudus waxay muhiimad wayn u leedahay labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil. Waxaa ku yaalla goobo barakeysan oo ay aaminsan yihiin seddaxda diimood ee dunida ugu badan, Islaamka, diinta Yuhuudda iyo Masiixiyadda.
in Qudus ay leedahay Israa'iil weli beesha caalamka maysan aqoonsan, dhammaan dalalkana waxay safaaradohooda ka dhisteen Tel Aviv.
Bariga Qudus oo magaalada Qadiimiga ah ay qeyb ka tahay waxay Israa'iil qabsatay ka dib dagaal lix maalmood qaatay oo dhacay 1967, Laakiin hadda ka hor looma aqoonsan in ay qeyb ka tahay dhulka Israa'iil ay maamusho.